तीर्थराज अधिकारीका कविता: युगचेत र जीवनका अभिव्यक्ति – BRTNepal
गोपी मैनाली २०७८ साउन २२ गते १९:३२ मा प्रकाशित
धेरै चर्चामा नआएका कवि तीर्थराज अधिकारीको कविता यात्रा चारदशक लामो छ । स्वतन्त्र लेखन र वृत्ति साधनामा रमाउनेहरु चर्चाका पछि लाग्दैनन्, फगत साधना गर्छन्, सिर्जनामा पोखिन्छन्, जीवनका अनुभूति संगाल्छन् । वास्तविक सर्जक त्यसैले छोपिएका हुन्छन्, चर्चामा छोपिएका हुन्छन्, समालोचनामा लुकाइएका हुन्छन्, पुरस्कारमा छलिएका हुन्छन् तर सिर्जनामा गहिरिएका हुन्छन् । यस्तै एउटा पहिचान हो कवि तीर्थराज अधिकारी ।
त्यसो त कवि अधिकारी विक्रमको २०४३ सालबाट ‘केही कवि केही कविता’ को सहलेखनमार्फत कवितामा प्रकाशित हुनथालेका हुन् । त्यसपछि ‘सपनामा हराएको विपना’ (२०६६), ‘सत्ताका किनाराहरु’ (२०७०), ‘टाँक’ (२०७१), ‘जङ्गल’ (२०७२) र ‘मकैका फूलहरु’ (२०७६) सङ्ग्रहका रुपमा र पत्रपत्रिकामा दर्जानौ कविताहरु प्रकाशित गरिसको छन् ।
कवि अधिकारी गोरखा सर्जक समाज, नेपाल स्रष्टा समाज र स्याङ्जा साहित्य प्रतिष्ठानमा आवद्ध छन् भने आदर्श खबर (मासिक) मा सम्पादन सल्लाहकारका रुपमा आवद्ध छन् । यस अर्थमा कवि अधिकारी लेखन, सम्पादन र प्रकाशनका गतिविधिबाट नेपाली साहित्यको श्रीबृद्धिमा समर्पित छन् ।
समय अन्तरालका दृष्टिमा कवि तीर्थका कविताहरु चार दशकका अनुभूति हुन् । तर कविताको भावभूमि र विषय परिवेश भने एकै छ, त्यो हो मानवीय बेदना, छट्पटी र उकुसमुकुस । कविताले वेदना र छट्पटीलाई उठाएको छ । सुन्दरता र आनन्दलाई पनि उठाएको छ । आक्रोस र विद्रोहलाई पोखेको छ । जीवनका कहालीलाग्दा परिवेशहरु, जो कविजस्तै जीवनले भोगेका छन्, अत्यास लाग्दो यात्रा जो कविजस्तै जीवनले पार गरेका छन्, उठाएर स्वतन्त्रता र खुसीको खोजी गर्नु कविताको केन्द्रीय भाव हो । यसैका वरिपरि कवि भावनाहरु छचल्किउका छन् ।
जेजस्ता परिवेश र छट्पटी, पीडा र उकुसमुकुस भए पनि जीवन स्वतन्त्रताप्रिय हुन्छ र निजत्वको प्राप्तिमा अनवरत लागिरहन्छ । कवि तीर्थ पनि स्वतन्त्रताका उपासक हुन्, स्वतन्त्र सिर्जनामा आनन्दित छन् । स्वभावैले सबै सर्जक स्वतन्त्रताका पक्षपाती हुन्छन्, निजत्व र मुक्तिका पारखी हुन्छन् । कोही भावनाको तरेलीमा वगेर स्वतन्त्रताको स्वाद लिन्छन्, कोही विद्रोहको विगुल फुक्छन्, कोही मनोलापमा उद्वेलित हुन्छन्, कोही चेतनाको सन्देश दिन्छन्, त कोही आक्रोसको अभिव्यक्ति । शैली मात्र फरक हुने हो । सबै सर्जक स्वन्त्रताका यात्री हुन्, उन्मुक्तताका अन्वेषक हुन । यस अर्थमा सबै सर्जक एकै ड्याङका हुन् । चेतनाले स्वतन्त्रता खोज्छ, स्वतन्त्रताको निर्माण गर्छ र स्वतन्त्र हुन सिकाउँछ पनि । कवि तीर्थ यसको अपवाद किन हुनसक्थे ? बरु अव्वल उदाहरण पो हुन् ।
सर्जक आप्mना सवै सिर्जनालाई समान माया गर्छन्, कुनैलाई राम्रोभन्दा कवि मन कुडिनसक्छ तर समालोचकीय दृष्टिले त्यसो भन्नुपर्छ पनि । ‘मकैका फूलहरु’ उनको उत्कृष्ट कृति हो । मकैका फूलहरु के हुन्, त्यहाँ के भन्न खोजिएको छ भन्ने हृदयङ्गम गर्दा स्वयम् कविका आफ्नै अभिव्यक्ति कविता बुझाउन काफी छन् । उनले भनेका छन्–‘शक्तिशालीहरु सपनाको व्यापार गर्दै निरिह जनतालाई चुट्दै, भुट्दै र लुट्दै सत्ताको सिँढी चढी शानले मान खाँदै मालामाल बनिरहेका छन् । निमुखा÷निम्छराहरु उचालिँदै÷पछारिदै जीवन विलाउन विवश छन्–मकैका फूहरु जस्तै ।’ कविको अभिव्यक्ति सशक्त कविताको चिनारीमात्र होइन, अहिलेका नेपालीहरुको विवशता हो, जीवनको नियति हो, युगको चित्र हो, शासकको चरित्र हो र शासक–शासितको बिम्ब हो । एकथरी मकै भुट्न घान हाल्नेहरु छन्, अर्काथरी घानमा पर्नेहरु छन्, एकथरी भुट्नेहरु छन्, अरुहरु भुटिने, खाइनेहरु छन् । उठ्न त खोज्छन् विचरा घानमा परेहका मकैहरु, घान हाल्नेले कप्टेराले छेक्छ, अन्तिम स्वासमा फूल उठ्दै विष्फोट त हुन्छन् तर बाहिरिन नपाउँदै बिटबाट खँगारिन्छन् । कति समयदेखिको बहुधा हामीहरुको नियति हो यो । अरु धेरै हो जो ‘मकैका फूलहरु’ जसरी नै अरुका अभिष्टका लागि आफूलाई उत्सर्ग गरिरहेका छन्, अस्तित्व सुम्पिरहेका छन् । तर सन्देश पनि हाँडीभरि नै छ, केही पोखिएका छन्, केही छेकिएको होलान् ।
‘मकैका फूलहरु’ को नियतिमा रहेका नेपालीहरु हाँडीभित्रै एकअर्का पोलिँदा÷पड्किँदा पनि परस्पर प्रतिस्पर्धाको जुधाइमा छन्, जीवन पूर्ण पराजित नभएसम्म, अस्तित्व अवसानमा नपुगेसम्म उनिहरु जुधिरहन्छन् ।
हार्नुको क्षणलाई स्विकार्दै
‘आखिर जीवनविनका –यी फूल
भोकका मस्ठा परिकार न हुन् ।’ (मकैका फूलहरु)
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गुणतन्त्र अनि प्रतिनिधित्व, समेवेशिता, सामाजिक न्याय र अरु धेरै शव्द र प्रयोगमा आफूलाई अस्तित्वविहीन गराइरहेका छन् । त्यसैले ‘मकैका फूलहरु’ मा आवाजविहीनहरुको आवाज पाश्र्वित छ, किनाराका अनुहारहरु देखिएका छन्, बञ्चितीकाहरुको बाध्यता छ र हेपिएका÷थिचिएकाहरुको स्वर छ ।
‘कथा र कथा वाचक’ निराश तर मौन आक्रोस हो । कथा बाचक आप्mनो कथा सुन्न चाहने पात्र पनि भेट्दैन, जसरी बहुधा नेपालीहरुका दुखका कथा सुन्नेहरु कोही छैनन् । प्रकृति पनि उसको दुख सुन्न चाहँदैन, जून पनि बादलमा लुकिदिन्छ्, घाम आगो ओकलेर गाली गर्छ, फूलहरु मौन असहमतिमा टाउको हल्लाउँछन्, माया गरिएका चराहरु पनि उसैलाई शिकारी सम्झन्छन् । त्यसैले कथा सुनाउन नै नपर्नेगरी जीवन अवशानमा पुग्न चाहन्छ कथा वाचक ।
‘थकित मेरो तातो निश्वासले
ढुगाको सिरानी र माटाको ओछ्यानमा
शितलताको आभास गर्दै
लोलाउँदै गए भने
मेरा यी जलनका कथाहरु
सायद कुनै पनि पात्रलाई
खोज्नुपर्ने छैन ।’ (कथा र कथावाचक)
रात र विम्बहरु पनि अन्याय र शोषणको विम्ब हो । अन्याय र अत्याचार गर्न रात नै चाहिन्छ, दुराचार र कुकृत्यका लागि रात नै चाहिन्छ । अरु धेरै अनाचार गर्न रातै सजिलो छ । रातको विम्ब समकालीन नेपाली समाजको विम्ब हो ।
‘उस्तै उस्तै रुपहरु’ ले समाज व्यवस्थालाई खिज्याएको छ । एउटा ‘उस्तै’ अवसरको अनन्त दोहन गर्छ, अर्को ‘उस्तै’ अनन्त पसीना र पीडामा छ । प्लेस प्रिमियम पाएकाहरु रमाउँछन्, स्वतन्त्रताको उपभोग गर्छन, अवसर मज्जाले लिन्छन् । प्लेस प्रिमियम, वर्थप्लेस प्रिमियम नपाउनेहरु अवसरबाट किनारा लाग्छन्, पीडामा पिल्सिन्छन्, जीवन घिच्चिएर मृत्युमा पुग्छन्, जीवनको आस्वाद गर्नै नपाई । यस्ता ‘उस्तै’ हरु धेरै छन् । आखिर दुवैको जीवन ‘उस्तै’ न हो । उस्तै उस्तै रुपहरु लाई ‘उस्तै’ कहिले बनाउने ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
‘यस जन्ममा’ मानिसले पाउने एउटै जीवनमा उज्यालो हेर्ने रहर, स्वतन्त्रताको स्वाद लिने रहर, उन्मुक्त हुने रहर र खुसी हुने रहरको आभ्यान्तरिक स्पन्दन हो । सायद सबै विवश जीवनहरु यही रहरमा तड्पिएका छन्, मकैका फूलहरु जस्तै ः
‘अँध्यारो उपहार नदेऊ
मेरो अर्को कुन जन्म र ?
बिन्ती १ यसै जन्ममा
रहर छ उज्यालो हेर्ने
सुन्दर आँखाका नानीमा
कुनै कालो पर्दा नलगाऊ ।’ (यस जन्ममा)
कविभाव संभावनाको जीवन र संभावनाको जन्मभूमिमा खल्लो जीवन विताउन विवश जीवनहरुको स्वर हो । मकैका फूलहरु भनौ कि जङ्गल वा सपना हराएका विपना । जीवनको स्वत्व वोध गर्न कवि कहिले प्रकृतिको, कहिले जन्मभूमिको त कहिले स्वतन्त्रताको सहारा लिन्छन् । ‘नारी जीवनको अर्थ’ मा पनि नारी जीवनको महत्तावोधको आग्रह छ । नारी जीवनको अर्थ कोख र काखको यथार्थ हो, उदात्तीकरण हो । कविले नारीलाई प्रकृतिको चित्रका स्वरुपमा उतारेका छन् । प्रकृतिले सिर्जना गरेजस्तै नारी सिर्जनाका खानी हुन् । प्रकृति जस्तै नारी जननी हुन् । प्रकृतिले पीडा सहेजस्तै नारी प्रसव पीडाबाट सिर्जना गर्छिन । नारी सहनशीलता र मायाको खानी हुन् । त्यसैले कविता नारी हुनुको गर्व गर्न, धर्ती जस्तै सपाट र आकाश जस्तै व्यापक हुन् अग्रह गर्दछ । सिर्जना महान हो, नारी सिर्जना वा आमा हुन् ।
कवि तीर्थ प्रकृतिका त तीर्थयात्री हुँदै हुन्, मानव प्रकृतिको रहस्यको पनि उद्घाटन गर्दछन् । ‘अनौठौ जीव’ मानिसको प्राकृतिक गाथा हो, संरचना चित्र हो । युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले ‘मेरो प्रतिविम्ब’ कै भावभङ्गीमा प्रस्तुत छ । कविता आफैप्रतिको, आफ्नै शरीर चित्रको सोलोडोलो प्रस्तुती हो ।
‘यो आकृतिको मान्छे
यो नको पिञ्जडामा जराजस्तै उफ्रिरहन्छ
कल्पनाका फूलहरु सजाएर
हातका रेखाहरु ग्निरहन्छ
अनौठो जीव मान्छे १ १ु
कवि तीर्थराज अधिकारी गद्यमा मात्र होइन, पद्यमा पनि उत्तिकै सशक्त छन् । छन्दमा लेखिएका उनका कविता कला र सौन्दर्यमा उत्तिकै अव्वल लाग्छन् । ‘सपनामा हराएको विपना’ र ‘सत्ताका किनाराहरु’ मा प्रकृति, विद्रोह, राष्ट्रप्रेम र जीवन भोगाइका अनुभूतिलाई मीठास शैली र सरल शव्द विन्यासले कवितालाई कालजयी बनाएको छ ।
कविलाई नेपाली हुनुको गर्व छ । नेपालीहरुको विरत्व र स्वाभिमानी पृष्ठभूमिमा कविमन उचालिएको छ । जातीय–सांस्कृतिक सद्भाव र हार्दिकताले राष्ट्रलाई एउटा सुन्दर फूलवारी बनाएको छ । त्यो फूलवारी अझै रङ्गीचङ्गी र सुगन्धित बनाउन कवि आह्वान गर्दछन् ः
‘न जातको भेद छ न धर्म भेद
न वर्णको भेद छ न लिङ्ग भेद
भाषा कुनै रङ्ग थिएन भेद
उदार संसकार कहाँ विभेद ।’ (यो फूलवारी सवले सजाऊँ)
राष्ट्र भूगोल मात्र होइन, भावनाको एकत्वीकरण हो, भाषा र भावना समानुभूति हो, माटो र मुटुको एकीकरण हो । यो भावनाको सूत्रमा बाँधेर नै भूगोलहरु राष्ट्र बन्छन्, माटोहरु राष्ट्र बन्छन् । माटो र मुटु वा भावना र भूगोल सम्मिलन गराइ राख्न सकिएन भने राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । नीति, विधि र शक्तिले मात्र राष्ट्र कसिलो हँुदैन । जातीय–भाषीय विभेद, वर्गीय–लिङ्गीय विभाजन, असहिष्णुता र सामाजिक सम्मिलनको क्रम टुट्दै गएकोमा कवि मन विह्वल छ ।
‘पुर्खा थिए बीर स्वाभिमानी
गले कहाँ ती दिलका कमानी
बनी कतै दास न गाँस खाए
सङ्कट आए सब पार लाए ।
त्यै रक्तको अंश र बंशलाई
नशा दशा यो किन होस हुन्न
धरा गरामा किन छिन्नभिन्न ।’ (यो फूलवारी सबले सजाऊँ)
स्वच्छन्तावादी कविहरु प्रकृतिमा औधी रमाउँछन्, प्रकृतिसंग मितेरी लगाउँछन्, प्रकृतिसाम्य बनेर सुन्दरतासँग खेल्छन् । कविशिरोमाणि लेखानाथ, मकाकवि देवकोटा र राष्ट्रकवि माधव घिमिरेमा यो विशेषता पाइन्छ । प्रकृतिसँग सर्जक मात्र रमाउने होइन, सामान्य मानिस पनि पानी पँधेरो, मेला मजदुरी, सुख सयल र दुख निराशामा प्रकृतिसाम्य बन्दछन् । तर सामान्य मानिसमा किव÷सर्जकसँग भएजस्तो भाषा र अभिव्यक्तिको सामथ्र्य हुँदैन । त्यसैले ती व्यक्तिन सक्तैनन्, जसले अभिव्यक्ति पाए, ती लालित्यपूर्ण हुँदैनन् । कवि अधिकारी प्रकृतिसँग खेलन, रमाउन, प्रकृतिको महिमा गर्नसक्ने शक्ति छ र ती लालित्यपूर्ण शिल्मा छन् ।
‘सरोजको माथ तडागमा छ
हिमाल अग्लो जल छालमा छ
पतङ्गका फर्फर पङ्खलाई
छ बाग तान्दै रसले भुलाई ।’ (मधु बहार)
कवि अधिकारी लेखानाथ, माधव घिमिरे भरतराज कै कोटीमा प्रकृति चित्रिणमा छन् । कवि हिमालको सन्दरता, झरनाको स्वच्छता, तालका तरङ्ग, तराईका फाँट, पहाडका जैविक विविधता र लेकवेसीसँग मनमुग्ध छन् । ‘मेरा माटाका विम्बहरु’ मा कवि रमिन्छन् । सायद प्रकृतिको सुन्दरता र जन्मभूमिको ममत्वले कविलाई सिर्जना प्रेरणा दिइरहेको छ ।
‘अग्ला–अग्ला गिरिवर जहाँ व्योममा माथ चढ्छन्
छाँगा सेत ाझरझर जहाँ बैंसका चाल चल्छन्
कखि च्याप्छन् हरपल जहाँ लेक लालीगुराँस
चल्ने हावा मलय छ जहाँबोक्छ मीठो सुवास ।’ (मेरा माटाका विम्बहरु)
कविका कवितामा समग्र प्रकृति प्रेम त छताछुल्ल छ नै, आफ्नो जन्मभूमि गोरखा र यसको परिवेशमा कवि झनै मुग्ध छन् ।
‘सुपुष्पले कोमल अङ्गलाई
आएर छामून भमरा रमाई
यतै गरुन् प्रेम मिलाप मौरी
खेलून् यतै शङ्कर साथ गौरी ।’ (आरुघाट)
पेशाप्रतिको माया, ममत्व र गर्व प्रत्येक मानिसलाई हुन्छ, सर्जक त यसप्रति झनै भावुक हुन्छन् । व्यक्ति कर्ममा रमाउन नै वृत्ति चयन गर्दछन् र जीवन जिउने आधार बनाउछन् । पेशाप्रति रमाउनु वृत्तिवोध र स्वयम्जवाफदेहतिा पनि हो । पेशाप्रति जवाफदेही हुनु कर्मलाई न्याय गर्नु पनि हो । सबै पेशा त्यत्तिकै गर्विला महत्वका छन् । सबै पेशाको उन्ननयनले नै सभ्यता फराकिने हो । पेशाभित्रको व्यावसायिक सदाचारले नै पेशाको इज्जत बढ्छ र त्योसो गर्ने वृत्तिसेवक आफनो उचाइ बढाउँछ । कवि शिक्षक पेशाको गर्वमा छन् ः
‘साना बालकमा नयाँ पथ दिने जिम्मा तिमीमै छ रे
आँखा ज्योति विलाउदै तल झरे माटो कठाङ्ग्रिन्छ रे
डाँडा पर्वत शैलले सुदिन क्यै मुस्कानको जीवन
खोज्छन् हात बढाऊ कर्मपथमा कतर््व्य सम्झीकन ।’ (शिक्षक)
‘रमाउँदै पाठ पढाउने म
सद्भावले हात समाउने म
हाँसेर खेल्ने कति साथ पाएँ
बिताउँदा काल न चाल पाएँ ।
मभित्र के धर्म र जात भेद
न छन कुनै लिङ् र रङ्ग भेद
उदारको हर्दम कर्म मेरो
भूगोल, भाषा न छ बर्ग मेरो ।’ (शिक्षक ः म)
‘शिक्षक’ र ‘शिक्षक ः म’ को समय अन्तराल छ । तर पछिल्लो समय झनै पेशा निष्ठा र समर्पणमा शिक्षकको महत्व झल्किएको छ । सामान्यतः मानिसहरु अर्को पेशाप्रतिको स्वादमा लोभिन्छन् । तर कविले पेशाप्रति न्याय गर्न सिकाएका छन् ।
सत्ता र शासनको विकृतिप्रति सर्जकहरु साधै विद्रोह गर्छन । भन्ने पनि गरिएको छ, कवि साहित्यकार सत्ताका स्थायी विरोधी हुन् । सर्जकहरु समाजमा सुसभ्य संस्कृति र सुशासनको पक्षमा हुन्छन्, सिर्जनामार्फत यसका लागि शङ्खघोष गर्छन् । त्यसैले रिमाल हुन् कि भूपि हुन, तीर्थ हुन् कि लव गाउँले हुन्, सबैमा समान चेतना पाइन्छ, समान प्रवृत्ति पाइन्छ, प्रस्तुतीको शैलीमात्र भिन्न हो । स्वदेशमा मात्र होइन, मानव अधिकार र स्वतन्त्रताप्रति विश्वका कुनै पनि शासक निष्ठूर बन्दा कवि हँुङ्कार गर्छन् । तियानमेनमा हजार्रौ युवामाथि बुल्डोजरले पेल्दा कवि कुर्लिन्छन् ः
‘नरमुण्ड लाल रङ्ग विषक्त छ
भुटेर कति दिन टिक्छ शासन ?
घडीको सुई कहा उल्टो घुम्छ ?
बन्द कोठा फुँटाउछ –मान्छे
हत्कडी चुँडाउँछ – मान्छे
सङ्गीन गलाउँछ –मन्छे ।’ (तियानमेनका प्राणहरु)
कवि तीर्थको कविचेतले समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको खोजी गर्छ, खुसी र समृद्धिको आह्वान गर्छ । स्वतन्त्रता भनेको मानवीय बस्तु हो, बौश्विक विषय हो । स्वतन्त्रता भनेका समानता हो, न्या हो । तर हाम्रो सत्ता सर्वसाधारणका अनुभूति र अपेक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, अपार संभावनाको उपयोग गर्न सक्दैन र स्वयम् सर्वसाधारणको क्षमताको उन्नयन गर्न सक्दैन, उल्टै उनीहरुलाई किनारा पार्दछ ।
‘तिम्रो सत्ता कति जहरिलो आसमा त्रास भर्छ
फक्री फुल्ने अधरभरिका मन्दमुस्कान हर्छ
बोक्छौ भारी कल र छलको भारले थुन्छ बाटो
तिम्रो यस्तै अधममतिले जन्मको गुम्छ बाटो ।’ (सत्ताका किनाराहरु)
समाज ढोंगतिर अगि बढेको छ । समाजमा अशान्ति छ, । हिंसा छ । हिंसा भावनात्मक र भौतिक दुवै छ । भावनात्मक हिंसा विचारको हिंसा भौतिक भन्दा डरलाग्दो छ । बुद्धको पूजा गरेर हिंसालाई आचरण बनाउने ढोंगीहरुप्रति कविमन दुखी छ । पाषाण मूर्ति पूजा गर्ने तर मानवता वास्ता नगर्नेप्रति कवि दुखी छन् । समाज परिश्रम र पसिनाबाट पनि भिन्न हुँदैछ । त्यसैले परिश्रमी ‘धनबहादुरको निधन’ प्रति दुखी छन् । धनबहादुर परिश्रमका विम्ब हुन् । कति धनबहादुरहरु जीवनको अर्थ नै वुझ्न नपाइ पसिनाका बुँद पुछ्दापुछ्दै जीवन उत्सर्ग गर्न परेकोमा कवि औधी दुखी छन् । थुप्रै वेथिति र विसङ्तिहरु विभिन्न कवितामा पोखिएका छन् । यो सबैको दोष, सत्ता, शिक्त र उनिहरुको जङ्लीपना हो । सत्ता बदलिए पनि, पात्र बदलिए पनि शासन बदलिएन र सामाज विसङ्गतिपूण छ । कवि भन्छन् ः
सुखको निद्रा छैन
छट्टु ब्वाँसा र स्यालहरु
कुनै विधानमा बाँधिएलान ?
गाउँ बस्ती बस्यो
गाउँ उचालिएर सहर उज्यालियो
आकृतिका मानव बस्तीमा
तर नियत र स्वभावहरु
उही जङ्गलका पथक छैनन् ।’ (जङ्गल)
कवि न हो, सँधै उत्साह र विद्रोहभाव मात्र राख्दैन । चेतना र सिर्जनामा स्वप्निल बन्दैन । संवेदनाका खानी कवि निरास र म्लान पनि छन् । दुखमा द्रवित पनि छन्, पीडामा पिल्सिएका पनि छन्, त्यै अनुभूति कविले उठाएका छन् । आखिर जीवनवृत्ति उठाउने कवि मानवीय निराशा उठाउन किन चुक्थे ः
‘आस्थाका मनहरु मूच्र्छित छन्
विषालु धुँवामात्र छ आँखामा
सिर्जनाकै खडेरी परेको मौसममा
मिल्किएको उपेक्षित कलम च्यापेर
कागजका मान्द्रामा अक्षरका आँसुहरु
बिस्कुन बनाएर कति सुकाऊँ १ु (पराविजत विजेता)
कवि विजेता हो । उ भावमा पनि विजेता हो, अभावमा पनि विजेता, शक्तिमा पनि विजेता र आशक्तिमा पनि विजेता । उच्छवासमा पनि विजेता हो आक्रोसमा पनि विजेता हो । तर कवि अहिले पराजित छ । कवि मात्र होइन, सर्जक पराजित छ, पेशा पराजित छ, न्याय पराजित छ, निष्ठा झनै पराजित छ । इमान, जमान र कर्म पराजित छ । उत्साहमा ‘शिखर चुम्ने पैतालाहरु’ पराजित छन् । त्यसैले इतिहास खोजेर भविष्य बनाउने सङ्कल्प छ कविमा । कवि आफैमा आग्रह गर्दछन् ः
‘कुम्भकर्ण निद्रामा निदाउनु हुँदैन
कृतघ्न भस्मासुर पनि म ब्यूँझनु हँुदैन
को बाँचन सक्छ ?
श्रद्धा–स्रष्टा जीवन्त हुनुपर्छ
अक्षय, भूत, वर्तमान, भविष्य हुनुपर्छ
विश्वास अमर अननत हुनुपर्छ
बटो म यही रोजीरहेको छु
नसामा अलिकति रगत उमारेर
इतिहास म आफू
आफ्नै खोजरहेछु ।’ (इतिहासको खोजीमा)
‘सिर्जना स्वान्त सुखाय मात्र होइन, पीडा, यातना र भोगाइहरुको निकास हो’ । कवि तीर्थको काव्य साधना स्वान्त सुखायका खोजी मात्र होइनन् नै न पीडा, यातना र भोगाइहरुका निकास मात्र हुन् । न ती अनुभूतिका कलात्मक अभिव्यक्ति मात्र हुन् । ती त समयचेत, जागारण र उत्सर्गका आकाङ्क्षा हुन् । कविले सिङ्गै समाज, शासन र संस्कृतिलाई उठाएका छन् । त्यसैले कविता कालजयी छन् ।
‘मकैका फूलहरु’ का भूमिका लेखक साहित्यकार एवम् विचारक डा. पुरुषोत्तम दाहाल कवि तीर्थको कवित्वको छर्लङ्ग प्रकाश पार्छन् ‘तीर्थ जीवन–व्यूहबाट केही बाहिर हुनखोज्दै गर्दा उनका सिर्जनाहरुको जन्म हुने गर्दछ । ‘..कवितामा जीवनको, जगत्को, यथार्थताको, जीवनमूल्यको, अनुभवको समवेत सिर्जनालाई उतारिहरको हुन्छन्’ । यहाभन्दा बढी कवि तीर्थका कविताका विषयमा के भन्न जरुरी छ र । सम्पूर्णता दिइसकेपछि अंश÷अङ््गहरुको विचरण कति आवश्यक हो र ?
डा. शैलेन्दुप्रकाश नेपालका दृष्टिमा ‘जीवनलाई कविताकलामा ढालेर मूलतः स्वच्छन्दतावादी शैलीमा युगका ध्वनिहरुलाई’ उतार्नु कवि तीर्थको विशेषता हो । कवि कलानिधि दाहालका शव्दमा ‘स्वाभिमानी तर ठट्यौले, गम्भीर अन्तरचेतनाको स्तम्भ तर हसिलो स्वरुपबाहक तीर्थराज अधिकारी स्वच्छन्दतावादी लेखनकै सेरोफेरोमा रहेर पनि कवि माधव घिमिरेजस्तै विचार÷भावप्रवाहमा स्वच्छन्दता र भाषागत संरचनात्मक संयोगमा पूर्ण परिस्कारवादी रहेको म पाउछु ।’
सफल सिर्जनामा अक्षरले पाठकलाई स्रष्टा (पात्र) को समानुभूतिमा लाने शक्ति हुन्छ, र पाठक आफै त्यहाँको कथानक बन्छ, अभिव्यक्तिलाई आफ्नै अनुभूति सम्झन्छ र आफै स्रष्टा भएको अन्तरवोध गर्छ । कवि तीर्थका कवितामा पाठक आफूलाई सिर्जना समानुभूतिमा पाउँछ ।
उनका प्रकाशित कृतिहरुको विवेचना गर्दा कवि तीर्थ जीवनका भोगाइका अनुभूतिलाई एकदमै सहज ढङ्गले उतार्ने कालिगढ हुन् । उनीमा प्रकृतिरम्यता छ, युगचेत छ, विद्रोह छ, मनोवाद छ । कतै उच्छवासमा तैरिन्छन् त कतै भावमा गहिरिन्छन् । कतै आक्रोसमा त कतै अपेक्षामा पोखिन्छन् । कतै उत्साहको पौल छ त कही निराशाको म्लानी छ । आखिर जीवन यी सवै अनुभूति–उच्छवासको छ्यास्मिस न हो । त्यसलै कवितामा सिङ्गै जीवन र युग बोलेको छ, कविताका अक्षरले जीवन पाएका छन् । यस्ता कवि समकालीन समाजमा कमै छन् ।